Ny Honor Note 10 dia neken'ny TENAA tamin'ny 512GB fitadidiana anatiny | Androidsis
Ny Honor Note 10 dia nohamarinin'ny TENAA miaraka amin'ny 512GB fitadidiana anatiny
Rehefa manakaiky ny daty famoahana Honor Note 10, efa fantatsika bebe kokoa ny momba ny toetra sy ny mombamomba azy manokana, izay, tamin'ity tranga ity, dia tafaporitsaka tao amin'ny TENAA, mpanamarina sinoa.
Araka ny voalazan'ny mpandrindra, marobe amin'ireo toetra efa noely re fa marina, izay manakaiky ny efijery goavambe sy ny SoC mahery. Ho fanampin'izay, ny zava-misy fa ny zana-kazo Huawei dia nampihatra fahaiza-mitadidy ROM kely tsy dia fahita eny an-tsena dia voamarina.
El lisitra teboka vao nambara tato ho ato ny fitaovana dia hanasongadina efijery 6.95 santimetatra goavambe miaraka amin'ny vahaolana FullHD + sy ny teknolojia AMOLED. Izy io dia manana fàfana efijery 2.220 1.080 x 18.5 teboka ary ny tahan'ny 9: XNUMX, ka io no finday Honor voalohany miaraka amin'ity endrika tontonana ity.
Ny Honor Note 10 dia mandeha amin'ny alàlan'ny processeur octa-core 2.4GHz. Na dia tsy manambara aza ny lisitra hoe iza no mampandeha ny finday, azo inoana fa ilay HiSilicon Kirin 970 SoC an'ny orinasa. Ho fanampin'izany, TENAA dia mampiseho amintsika fa tonga miaraka amina RAM 8GB sy 512GB fitadidiana anatiny.
Miorina amin'ny fakantsary, Izy io dia manana fakantsary roa misy aoriana miaraka amn'ny sensor voalohany 16MP (f / 1.8) + 24MP (f / 1.8) miaraka amin'ny flash LED sy ny PDAF Focus. Eo aloha dia manana mpitifitra 13 megapixel izay hanompo anay izy, ankoatry ny fanaovana selfie sy antso an-tsary, ho an'ny famohana ny tarehy.
Izy io koa dia tonga miaraka amina sensor sensor ho an'ny fiarovana fanampiny ary misy ny fanohanana Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, ary USB Type-C. Etsy ankilany, mihazakazaka Android 8.1 Oreo eo ambanin'ny interface manokana an'ny orinasa EMUI 8.2. Ho fanampin'izany dia misy batterie 4.900mAh misy fanohanana amin'ny famahanana haingana.
Mba hamaranana ny fanamafisana ireo antsipiriany rehetra ireo dia mila miandry andro vitsivitsy isika hanatanterahan'ilay orinasa azy fanombohana ofisialy ny 31 Jolay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Honor Note 10 dia nohamarinin'ny TENAA miaraka amin'ny 512GB fitadidiana anatiny
Xiaomi Mi Max 3 Pro dia hita an-tserasera
Ny fanapahana ny bozaka miaraka amin'ny fahafinaretana miaraka amin'ny Mowy Lawn